Unogona Kuita Kuwedzeredza Kuitira Kukuvadza Bhizinesi Rako? | Martech Zone
Unogona Kuita Kuwedzeredza Kuitira Kukuvadza Bhizinesi Rako?
China, April 2, 2015 Douglas Karr
Kuita munhu, zvine simba zvemukati, kumakisazve, IP kuteedzera ... isu tese tinoziva kuti vatengi vanokoshesa uye vanopindura zvakanaka kune zvakasarudzika mameseji uye zviitiko, asi vatengesi vanogona kuenda zvakanyanya here? Accenture yakaburitsa mhedzisiro yehunyanzvi hwekuita kwavo hunoti YES.
Consumer Yemunhu Ongororo Ongororo
The Accenture Yemunhu Kuongorora yakaongorora zvinotarisirwa nevatengi zvakakomberedza ruzivo rwekushambadzira uye yakaratidza mhando dzetekinoroji dzekutengesa, zvakagadziriswa zvevatengi uye kutaurirana - online uye muchitoro - izvo vatengi vanogona kusangana nazvo.
Welcome Welcome Personalization Strategies
Anogamuchirwa kwazvo mu-chitoro mutengesi kutaurirana uye zvipo zvinotaurwa nevanoongorora vakapindura zvinosanganisira:
otomatiki discounts pakubuda yeakavimbika mapoinzi kana coupon (82 muzana)
Yechokwadi nguva kukwidziridzwa (57 muzana)
Complementary mazano ezve chinhu (54 muzana)
Akakurumbira maitiro ehunyanzvi
Kana zvasvika kune zvakasarudzika zviitiko zvepamhepo, sarudzo dzakakurumbira dzinosanganisira:
Webhusaiti yakagadziridzwa nedhidhiyo (desktop, tablet, mobile) (64 muzana)
Promotional offers yezvinhu izvo mutengi ari kunyatso kufunga uye zvine hungwaru padandemutande kufamba zvichienderana nekuti shopper inoda kuongorora (59 muzana)
Enzanisa mitengo kana kutenga chinhu (59 muzana)
Kusagadzikana Kugadziriswa Kwemunhu Maitiro
Zvinoenderana neongororo, vatengi havana kunyatsogadzikana neanotevera maitiro ekuita:
Vatengesi kuratidza kwete kutenga zvinhu pamhepo kunze kwebhajeti yavo kunzvimbo hombe-dzetikiti senge yekuvandudza dzimba uye zvitoro zvemagetsi (46 muzana).
Vatengesi veMisa uye zvitoro zvekutengesa kuraira kwavari kwete kutenga zvinhu online pamhepo kunze kwekudzivirira kwavo kwekudya (40 muzana).
Chitoro shamwari dzinogona kupa recommendations zvichibva pane zvavo nyaya dzehutano hwemhuri muchitoro (42 muzana).
Chitoro shamwari ndichivakwazisa nemazita pavanopinda muchitoro (36 muzana).
Vatengesi vanovapa mhinduro kubva kwavari shamwari online (52 muzana).
Kuita kwako pachako kunogona kuve nzira ine simba yekuti vatengesi vaparadzanise kubva kune vanokwikwidza, kuwedzera saizi yebhasikiti uye kuvaka kuvimbika kwevatengi. Kuita zvinobudirira kuita kwega kwega nzira dzese, vatengesi vangabatsirike nekunzwisisa vatengi padanho rakakura pamwe neumwe neumwe - kuona kuti ndedzipi nzira dzemunhu dzinogona kutyaira mhedzisiro yebhizimusi, uye kupa maseteti makuru evatengi sarudzo yezvavanoda kutora chikamu. Dave Richards, wepasi rese maneja maneja weAccenture's Retail Practice
Kune mamwe masiyano zvichienderana nehuwandu hwevatengi. Ive neshuwa yekuverenga iyo Accenture Chokwadi Sheet uye tarisa uone zvizere.
Tags: Accenturekuongororwa kwekambaniPersonalization
Matanho gumi nemaviri ekuvaka Kudiwa kweYako Nyowani Agency
Maitiro eDhijitari Asset Management Anokanganisa Zvemukati Management